Dood: "Dadku inta badan waxay yiraahdaan" Jacaylku ma jiro da ', laakiin farqiga da' doodu aad u badani waxay noqoneysaa mid dhibaato ah gaar ahaan da 'da' da 'ah ... Run ama Been?
Posted By: KongoLisolowaa: Diisambar 8, 2018 00: 20 No Comments
Dhibaatada ka baxda
Dhibaatada galmada, iyo dhibaatooyinka kale ee la midka ah.
Halkani waa meesha aan ku ogaanno xaqiiq jirta, oo ay ahayd inaan markii hore tixgelinno, maxaa yeelay runtu had iyo jeer waxay ku dhacdaa inay nala qabsato!
Ilaah wuxuu ina siiyey qalbiga si uu u jeclaado, laakiin sidoo kale wuxuu ina siiyey maskaxda si uu uga fekero; qof kastaa wuxuu ku noolaan doonaa wanaag ama cawaaqib xun ee doorashadooda!
Dhowr sababood ayaa qof u horseedi kara inuu yeesho xiriir meesha uu ninku aabe ku noqon karo, laakiin markasta oday da 'ayaa walaac laga qabaa. "
Sep29 04: 52